Guriga R/wasaarihii hore ee Malaysia oo laga heley lacago badan iyo Dahab – Radio Muqdisho
Guriga R/wasaarihii hore ee Malaysia oo laga heley lacago badan iyo Dahab
Sida ay qortay Wakaaladda Wararka Reuters,War ay soo saareen Booliiska dalka Malaysia ayaa lagu sheegay in ay qabteen boqollaal kaartoon oo ay ka buuxaan waxyaabo qaali ah iyo boorsooyinka ay ka buuxaan lacago qalaad kuwaas oo laga helay guri lala xiriiriyay ra’iisulwasaarihii hore ee dalkaas Najib Razaq.
Aarintani ayaa ka dambeysay kadib markii Baaritaanno lagu sameeyay dhismeyaasha ku yaalla Kuala Lumpur,kaasi oo lala xiriiriyay baaritaanno lagu hayo dhaqaalaha mashruuca horumarinta ee 1MDB, sida ay sheegeen saraakiisha ammaanka dalkaasi.
Wararka qaar ayaa sheegayaa in ay jiraan balaayiin doolar oo aan la xisaab xirin oo qayb ka ahaa mashruucan uu Najiib sameeyay,waxaana raiisul wasaarihii hore ee Dalkaasi Najib Razak laftirkiisa lagu eedeeyay in uu qaatay 700 oo milyan oo doolar,inkastoo uu eedaasi iska fogeeyey.
Madaxda Dawladda Malaysia ayaa sheegay in uusan wax gaf ah samaynin, balse dhawr dal oo kale ayaa baaritaan ku billaabay.
Waxaana dhacday mar loo yeeray qof qufulada jabiyo si loo soo saaro lacag guriga Najiib taallay,Amar Singh oo booliiska u hadlay ayaa saxafiyiinta u sheegay in waxyaabaha la soo qabtay ay ku jiraan 284 boorso oo kuwa qaaliga ah gacanta lagu qaato.
Waxaa wararku ay intaasi ku darayaan in Askarta ay baartay 72 boorso oo laga helay lacago kala duwan oo ay ka mid yihiin midda Ringgit ee dalka Malaysia, doolar iyo walina dahab iyo saacado.